Nezvedu - Didlink Boka Co, Ltd.
TAKATANGA SEI KUTANGA KWEDU?
DIDLINK GROUP inyanzvi iri kuita Petroleum, Chemical, Marine valve boka rekambani muChina kubva muna 1998.
Kubvira pakagadzwa, zvigadzirwa zvedu zvave kutengeswa kuUNITED STATES, EUROPE, RUSSIA （CIS), SOUTH AMERICA, Pakati EAST, KUSUVA KWEZUVA ASIA, AFRIKA etc.
Zvigadzirwa zvedu zvakawana mukurumbira wakakwirira kubva kune vatengi vedu.
Yedu huru bhizinesi chiyero chinotevera
Gate mavharuvhu, Butterfly mavharuvhu, Globe mavharuvhu, Check mavharuvhu, Ball mavharuvhu, Plug mavharuvhu, etc.
Izvo zvinhu zvinosanganisira: Carbon Simbi, Staninless Simbi, Brass nezvimwewo.
Mafekitori edu ane zvitupa: ISO9001, CE, API, EAC, nezvimwewo.
DIDLINK GROUP rinoteedzera kururamisa uye kunaka kwekugadzira. Gara uchivandudza yavo yakasarudzika michina yekugadzira, inosanganisira yega yega chikamu.Uye isu tiri zvakanyatsoenderana nematanho ekuchenjerera ekugadzira, kuve nechokwadi chemhando yepamusoro yezvigadzirwa.In kuti vagadzire yakakwira-chaiyo zvigadzirwa.
Isu takatenga akati wandei makuru-akakwana akakwenenzvera CNC ekumisikidza nzvimbo. Otomatiki ekugadzirisa michina uye neyakawandisa dhizaini manejimendi inovandudza zvakanyanya kugadzirisa kunyatso uye kugadzirwa kwemhando yezvigadzirwa uye kuona kutendeka kwezvigadzirwa.
Scale Kugadzira Inokanda Enterprisestrength Uye Brand
Kunyangwe hazvo zvinhu zvakatengwa, zvinoriumba kana zvigadzirwa zvakagadzirwa zvoga, isu tinonyatsoteedzera yakajairwa system yezvigadzirwa kudzora maitiro, kuitira kuvimbisa mashandiro echigadzirwa uye mhando pasina chero kurasikirwa uye hatimboite kuti vatengi vanetseke. Kuburikidza neanoshanda kutonga kweE ERP, MES uye bar kodhi system, iyo kugadzirwa, kugadzirisa uye kuyedza kwenzvimbo dzese dzevharuvha inoteedzerwa kuti ibudirire nekuenderera kwekuvandudza kwehutarisiri hwemhando.
Chiwanikwa Steel Ball mavharuvhu, Ndarira Ball Valve, Stainless simbi Ball Valve, Utsanana Stainless Steel Ball Ball mavharuvhu, Bronze Bhora Valve Ine Ptfe Zvigaro, Stainless simbi Ball mavharuvhu,